Abantu abaninzi banokubandezeleka ngokutsha kunene. Abaninzi nje abakwaziyo ukuba badle ngokufanelekileyo, baholele indlela yokuphila enempilo, basuse i-toxins emzimbeni. Abasetyhini kunye namadoda abangeke banomdla kwizizathu zezifo zabo. Kubo, into efuna ngokwenene imfihlakalo. Ukugqithisa kakhulu kubangelwa izifo ezifana ne-gout, uxinzelelo lwexinzelelo, njl. Ukuncedisa ekugqibeleni ezi ngxaki kuza kubhabha. Kodwa abaninzi abantu bazama ukukwenza ngezinye iindlela-balambile ngokwabo, benza imisebenzi enzima. Ngokuqhelekileyo bayazilimaza ngakumbi, abaziqondiyo. Ibhethi iyindlela ephumelelayo kwaye inomdla kwaye inomdla ekulwa nemililo eyongezelelweyo. Indlela yokulahlekelwa isisindo ngoncedo lokuhlamba , namhlanje kwaye kuya kuxutyushwa.
Kakade, njengakunoma yimuphi umgaqo, kukho imingcele yokuya kubhabha: ukushisa okuphakamileyo, umzekelo, kwi-ARI; ukuya esikhathini; ixesha elimangalisayo lwezifo ezingapheliyo; ukukhulelwa kunye nexesha lokutya; iziqholo ezinobungozi esikhumbeni; Isifo se-Parkinson, ukuhluthwa kunye nezinye izifo ezinxulumene nenkqubo yesifo. Ngaloo ndlela, kufuneka nje ukuba uqaphele ukutyelela ibhedi, kwaye uphulaphule umzimba. Ukuba unenkxalabo malunga nantoni na, kungcono ukuyeka iinkqubo okanye udibane nodokotela ukuze ucebise. Kwimeko apho unempilweni ngokupheleleyo kwaye uqinisekile emzimbeni wakho, unokuhamba ngokuphepha kwaye uhlambe. Kukho iintlobo ezi-3 eziphambili zokuhlamba: iRashiya, isiFinnish neHammam yaseTurkey.
Ibhobha yaseRashiya yabonakala ngexesha lokubunjwa kwabantu baseSlavic. Kwiminyaka ye-annals, ethandana nekhulu le-10, ibhagi yayibizwa ngokuthi "isepha". Iqondo lokushisa livutha ukuya kwii-100 degrees. Iimpawu eziphambili zokuhlambela zivumba leemifuno kunye nokwanda kwamanzi.
Ibhotile yaseFinnish iyancipha. Apha iqondo lokushisa lijikeleze i-degrees 70-80. Uthotho lwama-30%, oluncinci kunesiRashiya. Kukholelwa ukuba ukuhlamba okunjalo kunemiphumo emihle kwinkqubo yokuphefumula yomzimba, kwandisa imfutho, kuphucula ukujikeleza kwegazi, kunceda ekunciphiseni uxinzelelo lwengqondo.
I-hammam yaseTurkey, elithetha "ukutshisa" ngesi-Arabhu, yinto "ebanda kakhulu" yamabhati. Iqondo lokushisa liphakama ukuya kuma-40-50 degrees. Efanelekileyo kubantu abangakwazi ukunyamezela ukushisa okuphezulu. Enye yeempawu zenza iinkqubo, ezifana ne-sop peeling. Ulungiselela ulusu ukwenzela iinkqubo ezongezelelweyo.
Kungcono ukunciphisa ubunzima ngoncedo lokuhlambela isiRashiya, kuba liyakhupha kumntu, kwaye zonke izinto ezinobuthi kunye nezinto ezingadingekile ziyahamba.
Ubhubhe, ukupenda, ukuhlalisa.
Iprogram yokunciphisa inkqubo iquka inkqubo ye-sauna yaseRussia okanye yeFinnish ngokudibanisa neenkqubo: ukusilalisa, ukumbumba. Okokuqala kuza ukukhutshwa kwendawo ephezulu yesikhumba kunye neeseli ezifile, okubizwa ngokuba yi-peeling. Iityuwa zoLwandle Olufile zisetyenziselwa oku. Izalisa ulusu ngezinto ezifanelekileyo, kuphucula ukujikeleza kwegazi. Emanzini alo lulwandle kukho iindidi ezingama-21 zamaminerali eziyimfuneko kwimpilo ephumelelayo. Ukufezekisa umphumo omhle, ioli kunye neentyatyambo ze-lotus zongezwa kuyo. Ikhumba elihlambulukileyo liya kuba lula ukuphendula kwiinkqubo.
Okulandelayo kuza enye yeyona ndlela efanelekileyo yokulwa ne-cellulite Oku kufuna ifilimu, ukwakheka ngokukhethekileyo. Olu hlobo lusetyenziswa ngodaka, i-brown algae, ubusi, i-anti-cellulite i-oyile, itiye eluhlaza, njl. Imveliso isetyenziselwa kwiinkalo zengxaki, umzekelo, izibilini. Ngethuba le nkqubo, umswakama ogqithisiweyo uyasuswa, kwaye amafutha emzimbeni wehla. Emva kokuhlaziya okuphumayo komzimba wonke kunyanzelekile.
Ngokuncediswa kwinkqubo enjalo kunye nokuhlamba ungakwazi ukunciphisa ubunzima ukuya kwi-1.5 kg.
Emva kokuhlamba, izihlunu ziyafakwa, ukuze amandla abo abuyiselwe. Ukwandisa ukujikelezwa kwegazi kunye nokunciphisa imilambo yegazi eye yanyanzeliswa. I-Steam iguqula imibimbi, i-sweating isusa i-slag emzimbeni.
Ibhedi yinkampani enzima kwaye ixanduva. Kubalulekile ukuhambela ukutyelela ngokufanelekileyo. Unako ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kokufeza le nkqubo, nje ukuqhuma. Ukuba uya kuhlamba okokuqala, kufuneka ukhumbule ukuba unako ukuhlala apho kungekho ngaphezu kwemizuzu eyi-15-20. Emva kwesi sihlandlo, thabatha ikhefu ngokufanayo njengoko usebenzise isitya. Iifowuni ezinjalo kumntu oqalayo ziyakwanela 2-3. Ngexesha, le mali inganyuswa. Abantu abanamava okuhlamba bancinci kwiifowuni ezi-5. Into ebaluleke kakhulu ngexesha lokutyhawula ukuphulaphula umzimba wakho. Ngokukhawuleza ukuba kukho izifo - kungcono ukuphuma.
Uncedo ekulahlekelweni kwesisindo kunokunqunyulwa, okufuneka ukuba udakwe ngaphambi kokutyelela ukuhlamba. Nazi ezinye zokupheka:
Chicory. Ekulungiseleleni isisombululo se-chicory, ingcambu yayo isetyenziswa. Iziphuzo ezinjalo ziyanceda i-system ye-nervous, yenzeke ngokusemthethweni umsebenzi wegastrointestinal tract. I-Chicory inceda gqitha abantu abaye bahlupheka, umzekelo, i-pyelonephritis, ekubeni iphucula umsebenzi wezintso.
Peppermint. Le yityalo enomsoco. Ngokuqhelekileyo kugqityiwe kwaye kugqitywe umtshini weshukela.
Raspberry. Kubantu, le berry isetyenziselwa ubuhlungu kumajoyina, ubushushu, ukuphazanyiswa kwamathumbu. Ngokuqhelekileyo, isisombululo silungisiwe: thatha i-spoonful of raspberries, uthele amanzi abilayo uze ulinde imizuzu eyi-10.
Kalina. I-tea kunye ne-kalina ine-diaphoretic ne-diuretic effect. Ukongezelela, kuphucula ukujikeleza kwegazi, okukhawuleza ukukhawuleza ukuvuselela isikhumba.
Emva kokuya kuhlamba kunceda kakhulu ukusebenzisa i-scrub. Ngoku akukho nxaki ukuyithenga kwivenkile, kodwa kubafundi bezonyiso, ezilungiselelwe ngezandla, unokwenza ityuwa yolwandle, ubusi kunye nocyuwa omuncu. Faka isicelo sokutshiza isikhumba kunye nokusila.
Emva kokutyelela u-2x ebhafini, umzimba wakho okhuni ulungele ukuthatha iinkqubo ezongezelelweyo. Thatha udongwe okanye udaka, uyinqumle kwiindawo ezinengxaki kwaye uzifake ngefilimu. Ubumba obumnyama bufaneleke kakhulu unyango lwe-cellulite. Utshisa amafutha.
Emva kwayo yonke inkqubo, sebenzisa ukhilimu okanye ioli ukuze ulahlekelwe isisindo. Ezi zixhobo ziphumelela kakhulu ukufaka isicelo esikhwameni somoya. Qinisekisa isiphumo kunokuhlalutya iingxaki.
Ngokuqinisekileyo, ngoncedo lokuhlamba ungakwazi ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza, kodwa ukuze ugcine umphumo ngokukhawuleza kunokwenzeka, kufuneka uholele indlela yokuphila enempilo, udle ngokufanelekileyo uze ulindele ukuphumelela.
Iipropati ezisetyenziswayo ze-daikon
Iibhonsi kunye ne-sinamoni kunye ne-glaze eluhlaza
Umntu kufuneka alele kangakanani?
I-recipe elula yoKhupha 8: iinqayi zeesekiti "iLamington"
Kutheni kunzima ukuthetha - Ndiyakuthanda?
I-Veal isibindi kwisitayela saseBerlin
Ukubonakala komntwana wesibini kwintsapho